SONATA-CANTATA: Blog Day 2011
Blog Day အမှတ်တရပို့စ်များ လက်လှမ်းမှီသလောက် စုစည်းထားပါတယ်။ ထပ်ဖြည့်ရန် ကျန်သေးသော ပို့စ်များကို CBox (သို့) ကော်မန့်တွင် လင့်ပေးခဲ့ပါ။ ဖောင်မပိတ်သေးပါး)
1 ၀ါခေါင်မိုး မအိမ်သူ - Happy Blog Day!!!
2 A SMILLING FLOWER - ဘလော့ဂ်နေ့ ၂၀၁၁
3 An Asian Tour Operator - သတိအန္တရာယ်ရှိသည်
4 Angelhlaing - ဘလော့ဂ်ဒေးအမှတ်တရ (Tag Post)
5 blackroze - ခံစားမှုသံစဉ် - blog day အမှတ်တရ
6 Iora - ဘလော့ဂါပွဲဈေးတန်းမှာ ယောင်လည်လည်
7 jasmine (တောင်ကြီး) - ဘလော့ဂ်ဒေး
8 K - ပန်းခင်း (for blog day)
9 khin oo may - ဟိုစောင်းဒီစောင်း
10 My Favorite Place in Little Pigeonhole - Blog Day 2011
11 My Wonderful Moral Thoughts - Blog Day အမှတ်တရ
12 My World ဖြိုးဖြိုးလှိုင် - ဘလော့ဂ်ဒေးမှာ ရယ်ရယ်မောမော
13 N/A - ဝေး..စိတ်ဖြေ - ဘလော့ဒေး (၂၀၁၁)
14 Rose of Sharon - ဘလော့ဂ်ဒေးအမှတ်တရ
15 S-C - တိမ်တွေပေါ်မှာ နင်ရယ်၊ ငါရယ်၊ သူတို့ရယ်...
16 shwezinu - ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ
17 sosegado တည်ငြိမ်အေး - တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို...
18 White Angel - Happy Blog Day
19 yamin - ရွှေမြန်မာ -သြဂုတ်လ ၃၁ရက်နေ့ တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်ဒေး
20 Younggun - ဘသားချောတို့ ဘလော့ဂ်ဒေး
21 ကိုကိုမောင် (ပန်းရနံ့) - သူကြီးမင်းရဲ့ ဘလော့ဂါဒေးပုံပြင်
22 ကိုပီတာ - Are you ready to celebrate Blog Day?
23 ကိုဇော် - ဘလော့ဒေး
24 ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ) - ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် အမှတ်တရများ (အပိုင်း-၂)
25 ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ) - ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် အမှတ်တရများ (အပိုင်း-၁)
26 ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ) - ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် အမှတ်တရများ (အပိုင်း-၃)
27 ခင်မောင်ချင်း - ချင်းကလေး - Blog Day
28 ချစ်ကြည်အေး - ဘလော့ဂ်နေ့ ဆုမွန်ကောင်း
29 ချယ်ရီမြေ - ချက်ကြီးပြောချင်သော ဘလော့ဒေး
30 စုချစ်သူ - ချစ်သောဘလော့ကာများ
31 ဆုမြတ်မိုး - Happy Blog Day
32 ဇွန်မိုးစက် Coral Reef - ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ ဘလော့ရွာသူ ရွာသားများ
33 ညိမ်းနိုင် ( မျောလွင့်တိမ်တို့ နားခိုရာ) မောင်လေး - ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် အမှတ်တရ
34 ညီလင်းသစ် - Blay Dog အမှတ်တရ
35 ထာဝရသစ္စာ - blogday.tag
36 ထူးတေဇာ - My Burmese Blog - Blog Day 2011
37 နတ်ဆိုးလေး - Happy Blog Day (August 31) အမှတ်တရ တဂ်ပို့စ်
38 ဖြိုးမောင်မောင်(CTM) - ရေးမိရေးရာ အဖြာဖြာ- BLOG DAY
39 မင်းဧရာ - ဘလော့ဂ်ဒေး
40 မဒမ်ကိုး - Blog Day အမှတ်တရ
41 မယ်ကိုး - ပြတင်းပေါက်ကလေးများ
42 မိုးခါး -ထာဝရကြယ်စင် - Blog Day!!
43 မိုးစက်ပွင့် - ဘလော့ဂ်ဒေး တဲ့လား
44 မိုးပန်းချီ -ဖြစ်တည်ခြင်းတစ်ခု အကြောင်း (သို့) အမှတ်တရ B108 Day!
45 မိုးယံ - ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ
46 မြစ်ကျိုးအင်း - ဘလော့ဂ်ဂါ ပွဲဈေးတန်း (၂)
47 မြသွေးနီ - ဟက်ပီဘလော့ဂ်ဒေး
48 ရွှန်းမီ - စုံစီနဖာ - 14 Little Mirrors
49 လင်းဦး (စိတ်ပညာ) - ဖြတ်သန်းခဲ့သမျှ ဘလော့ဂ်ဂါသမိုင်း
50 လင်းခေတ်ဒီနို ဗညားရှိန် ဆက်ပိုင် - Blog Day အမှတ်တရ
51 သက်တန့်ချို - Blog Day
52 သက်ဝေ - 2011 Blog Day အမှတ်တရ
53 သဒ္ဓါလှိုင်း - blog day အမှတ်တရ
54 သိင်္ဂါကျော် - နှင်းဆီခင်းကို ပျိုးခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နေရာ
55 အန်တီတင့် - ဘလော့ဂ်ဒေး
56 အမှတ်တရလေးများ - ၀ါဝါခိုင်မင်း - Blog Day အမှတ်တရ
57 အဖြူလေး - ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ
58 အလင်းသစ် - Blog Day အမှတ်တရ
59 အိမ့်ချမ်းမြေ့ - အမှတ်တရလေးများ (ဘလော့ဂ်နေ့အတွက်)
60 အတွေးစလေးများ ဦးဟန်ကြည် - ဘလော့ဂ်ဒေး - ၁
61 အတွေးစလေးများ ဦးဟန်ကြည် - ဘလော့ဂ်ဒေး - ၂
62 အတွေးစလေးများ ဦးဟန်ကြည် - ဘလော့ဂ်ဒေး - ၃
63 ကောင်းကင်ဖြူ - ကိုဘုန်း - blog day အမှတ်တရ
64 ကောင်းမွန်ဝင်း - ဘလော့ဂ်ဒေးဆုတောင်း
65 ချော အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် - ဘလော့ဂ်ဒေးအမှတ်တရ
66 ငွေလမင်း - ဘလော့ဂ်ဒေး
67 စော (အ၀ါရောင်မြေ) - ဘလော့ကြသူများနှင့် ဘလော့ကာဒေး
68 စော (အ၀ါရောင်မြေ) - ဘလော့ကြသူများနှင့် ဘလော့ကာဒေး
69 ဆောင်း- Blog Day!
70 ဆောင်းနှင်းရွက် - ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် အမှတ်တရများ
71 နေ၀သန်ရဲ့ အိုအေစစ် - ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ
72 ပေါက် KKK - ဖြစ်ညှစ်ရေးသောစာ
73 မေဓာဝီ - ၅-နှစ် ရှည်ကြာ ဘလော့ရွာ
74 မေသိမ့်သိမ့်ကျော် - ဘလော့ဒေး
75 မောင်မျိုး - ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ (၁)
76 မောင်မျိုး - ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ (၂)
77 မောင်မောင် (မြစ်ဆုံ) - ကျနော်နဲ့ ပထမဆုံးသော ဘလော့ဂ်ဒေး
78 မောင်မောင်၏ဘလော့ဂ် - ဘလော့ဂ်ဒေး တဲ့
79 ရွှေပြည်သူ - Blog Day 2011 အတွက်
80 အောင်သာငယ် - Blog Day 2011 အမှတ်တရ
81 နိုင်းနိုင်စနေ - သြဂုတ်လ (၃၁) ဘလော့ဂ်ဒေး
82 နှင်းနဲ့မာယာ - ကျမ ဘလော့ဂါမဟုတ်ပါ
83 ကြယ်လွမ်းသူ ချိုကျ - ဘလော့ဂ်ဒေးအမှတ်တရ
၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ လက်တွဲခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ် သူငယ်ချင်းတွေကို သီချင်းလေးနဲ့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်...
video လေးလုပ်ပြီးမှ ခင်မင်ခွင့်ရလို့ ကျန်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း သီချင်းလေး တူတူနားထောင်မယ်နော်...SONATA-CANTATA မှာ ဆုံကြသူ အားလုံးအတွက်...
(Leo အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းလေးကို ကိုဧရာရဲ့ ညီက တီးခတ် သီဆိုထားပြီး ဟာမိုနီ ကိုဧရာနှင့် မောင်နှမများဖြစ်ပါတယ်။)
ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရပို့စ်တွေကို အခုလို အမိုးအကာ တစ်ခုတည်းအောက်မှာ တစုတစည်းထဲ ထားလိုက်တဲ့ အိုင်ဒီယာက ကောင်းသလို ၂၀၀၈ တုန်းက ဗီဒီယိုလေး လုပ်ထားတဲ့ စိတ်ကူးလေးကလည်း ဆန်းသစ်တယ်၊ အခုလို အချိန်မှာ ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ငြိမ်သက်သွားကြတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို တွေ့တော့ လွမ်းစရာ...၊ Leo ရဲ့ အဲဒီ သီချင်းကိုတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကြိုက်ခဲ့တယ်..။
31 Aug 11, 14:05
လသာည: ပျော်ရွှင်စရာ ဘလော့ဂ်ဒေးလေးပါ မမသီတာ။
31 Aug 11, 14:06
လသာည: ♪တသက်လုံးပဲ သတိရနေမယ် ရင်ထဲမှာ♫ :)
31 Aug 11, 14:13
ခင်မောင်စိုး: လာလည်သွားတယ်နော် ဘလော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်
31 Aug 11, 14:21
31 Aug 11, 14:55
လသာည: မမသီတာ.. မန့်တာ မရလို့ စီဘောက်ထဲမှာပဲ အော်ခဲ့ပါတယ်။
31 Aug 11, 14:56
လသာည: အမှတ်တရ ဘလော့ဒေးပိုစ်တွေ စုစည်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့.. တခါတည်း အကုန်ဖတ်လို့ ရသွားပီ
၂၀၀၈ က ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာ အဟောင်းလေးတွေကို အခုလို တွေ့လိုက်ရတော့ အတော်အံ့သြသွားတယ်... ရင်းနှီးနေကျ စာအုပ်ဟောင်းဟောင်းလေးတွေကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလိုပါပဲ...။ စိတ်ကူးကောင်းလေးနဲ့ သေသေချာချာ သိမ်းဆည်းထားတတ်တာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာမိပါတယ်...
Happy Blog Day ပါ ကိုဧရာ နဲ့ မသီတာ...း))
စုစည်းထားတဲ့ ဘလော့လေးတွေထဲက မသွားရသေးတဲ့ နေရာတွေဆီ သွားရင်း သီချင်းလေးလည်း နားဆင်သွားပါတယ်။။
ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲက ဘလော့တွေထဲမှာ ကျနော့်ဘလော့ အပါအ၀င် တချို့ဘလော့တွေလည်း မပါဘူးနော်၊ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ....
ကြည့်ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှန်းမသိ..။
ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲက တချို့ဘလော့ဂ်တွေလည်း ဆက်မရေးကြတော့ဘူးနော်။ အခုလို ပြန်ကြည့်မိမှ အရင်က သွားလာခဲ့တာတွေ ပြန်သတိရမိတယ်။
ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲက ၂၀၀၈ ကိုယ့်ဘလော့လေးပြန်ကြည့်ပြီး လွမ်းတယ် မသီတာရယ်။ လမ်းတ၀က်ရောက်တော့ လှည့်အကြည့်မယ်... မုန်တိုင်းတခု တွေ့တယ်....
ကိုအောင်ရေ...ဗွီဒီယိုလေးက ၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာလကုန်က လက်လှမ်းမီသလောက်နဲ့ လုပ်ထားတာလေ...အများကြီးကျန်သွားတာပေါ့
ခင်ခင်မင်မင် "ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကြီးတော့" လို့ကောမန့်လေးရေးလာတဲ့ နေ့ကို ♪ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး..♫ မမသီတာရေ...ခုရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါင်းချုပ် အိုင်ဒီယာလေး ကောင်းချက်..မမရယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဘလော့ဂ်နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်း)
မရေ...သတိရတယ်။ မမတို့ မိသားစုလိုက်ကြီးကို ဘယ်လိုခင်သွားမှန်း မသိအောင် ခင်သွားတာ။ အဆင်ပြေတဲ့တစ်ရက် အိမ်လာလည်မယ်နော်။
ဟက်ပီးဘလော့ဒေးပါ။ (သီချင်းလေးဖွင့်ပြီး အစအဆုံး နားထောင်သွားတယ်)
31 Aug 11, 19:34
Pauk: စိတ်ထဲမှာ စကားတွေ ၇ှိနေတယ်..ပြောမထွက်ဖူး။
31 Aug 11, 20:24
seesein: ရပါတယ် အမတို့ရေ အဆင်ပြေသလိုပေါ့နော
31 Aug 11, 21:20
သဒ္ဓါလှိုင်း: Happy Blog Day... ဘလော့ဒေးအမှတ်တရပိုစ့်လေးတွေကို စုစုစည်းစည်း ပြုစုပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။။။
ကျနော့်ဘလော့လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖ်ါဝါရီလမှာ စလုပ်တာလေ၊ ဒီလို ချန်ခဲ့တာဟာ ကျနော်တို့ကို အဲဒီခေတ်တုန်းက ဘလော့ဂါ ပေါက်စနလေးတွေဆိုပြီး ထားရစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ အဲလိုလား ... :P
ဗီဒီယိုဖိုင်လေး လုပ်တဲ့ အိုင်ဒီယာ အရမ်းကောင်းတာပဲ။ လီယိုအဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းလေးလဲ ကြိုက်တယ်။ ၂၀၁၂ ဘလော့နေ့အတွက် ခုကတည်းက ကြိုပြီး အပ်ပါရစေ ... ။ ကိုဧရာကို တီးခိုင်းပြီး မသီတာက သီချင်း ဆိုပါ။ ကိုဧရာ ဘာပဲတီးတီးပါ လက်ခုပ်တီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုရှင်က အဓိက မဟုတ်လား :)
အစ်မရေ အဆင်ပြေလိုက်တာ။ တစ်ထိုင်ထဲ ဘလော့ဂ်တွေ အကုန်ရောက်သွားလို့ လည်ပတ်နေတယ်။ တပျော်ကြီးပဲ။
ဒီနေ့ ဟင်းချက်ချိန်မရရင်တော့ အစ်မပဲနော်။း)
အစ်ကိုဧရာနဲ့ အစ်မသီတာ အိုင်ဒီယာ ကောင်းတယ်..။ ဘလော့ဂ်ဒေး ပို့စ်ဒိုင်ယာထြီ လုပ်ထားတယ်။ :)
မသီတာ၊ ကိုဧရာ စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာ။ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ကြည့်သွားတယ်။ သီချင်းလေးကလည်းနားထောမင်ကောင်း၊ ဘာမှန်းမသိ လွမ်းသလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။
That is called "Ma Thida"... အိုင်ဒီယာအရမ်းကောင်းတဲ့ ချစ်စရာမသီတာ... :)
2008.....အင်...အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဘလော့ဆိုတာကို
မိုက်တယ်ဗျာ၊ အချိန်ပေးပြီး သေချာလုပ်ထားပေးတာပဲ။
မလေး ဒီလင့်လေး ယူသွားမယ်နော်..
ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာကို နေရင်းထိုင်ရင်း လွမ်းသွားမိပါတယ်။
S-C ရေ ဘလော့ဒေးစုစည်းမှုလေးကို အမှတ်တရသိမ်းဆည်းဖို့ ကော်ပီယူသွားတယ်နော်။ အခုလိုစုစုစည်းစည်းလေးလုပ်ဘို့ အိုင်ဒီယာကို ချီးကျူးပါတယ်။